Nepali Christian Bible Study Resources - भूकम्पमा पनि आशा
» तपाईंको पहिलो खाँचो » भूकम्पमा पनि आशा
एउटा कुरा निश्चित छ: गत दिनका भूकम्पहरूमा तपाईंको ज्यान गएको भए, यो पृष्ठ तपाईंले आज पढ्नुहुने थिएन। के तपाईंको मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्दैन र — “भूकम्पमा मर्ने ती ८,९६४ का साथसाथै म पनि मरेको भए म आज कहाँ हुन्थे होला?” यो एकदम जायज प्रश्न हो। माटोको शरीर माटैमा मिल्छ तर एउटा मान्छेको अनमोल, अमर आत्मा एक न एक ठाउँमा जान्छ — कि स्वर्गमा कि नरकमा। गु-डु-डु-डु गरी भूकम्प जाँदा आफ्‍नो ज्यान बचाउन तपाईं कुनै सुरक्षित स्थानतिर भाग्नुभयो। गरिब र करोडपति चौरमै बास बसे। सम्पत्तिभन्दा ज्यान ठूलो हो, प्रायः सबैको मुखबाट यही कुरा सुनिन्छ। आज सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सन्देश सुनी आफ्‍नो ज्यानभन्दा पनि अनमोल आत्माको अनन्त सुरक्षाको लागि मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टकहाँ भागी आउनुस्! किनभने येशूले भन्नुभयो, “मानिसले सारा संसार प्राप्त गरे तापनि आफ्‍नो आत्माचाहिँ गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुनेछ र?”१
हो, आखिरमा शरीर त सबैको मर्छ, चाहे भूकम्पले होस् वा अन्य कारणले। तर ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेको आत्मा स्वर्गमा जान्छ। शास्त्रले भन्दछ, “जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ, ऊसँग अनन्त जीवन हुन्छ; अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन, त्यसले जीवन देख्नेछैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ”।७
आखिरमा स्वदेशी-विदेशी सबै पापी छन्। सबै मर्छन्। सबैलाई पापको क्षमा चाहिएको छ। सबैलाई शान्ति र मुक्ति चाहिएको छ। येशूले भन्नुभएको छ, “म संसारको ज्योति हुँ; जसले मलाई पछ्याउँछ ऊ अन्धकारमा हिँड्नेछैन तर उसले जीवनको ज्योति पाउनेछ”।८ घाम एउटै छ; त्यसले सारा विश्वलाई उज्यालो दिन्छ, चाहे नेपाल, चाहे अमेरिका। संसारका सृष्टिकर्ता र मुक्तिदाता पनि एउटै हुनुहुन्छ। उहाँले विश्वास गर्ने हरेकलाई उज्यालो पार्नुहुन्छ, चाहे गोरा, चाहे काला।
« अनन्त विनाशबाट बाँच्ने उपाय
मुक्ति पाउन मैले के गर्नुपर्छ? »